Singapore - Xumbada Safarka ee Hong Kong ayaa dib u dhacday markale
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hadalka Dalxiiska » Singapore - Xumbada Safarka ee Hong Kong ayaa dib u dhacday markale
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Hong Kong • Warshadaha Warshadaha • News • Ammaanka • Wararka Singapore • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Hal usbuuc ka badan ayaa ah kii ugu dambeeyay ee muddo dheer la filayay in Hong Kong Singapore Travel Bubble markii ugu horreysay lagu dhawaaqay markii ugu horreysay sanadkii hore bishii Nofeembar iyo markale Maarso.
Hong Kong iyo Singapore waxay dib u dhigeen qorshihii khamiista ee la qorsheeyay ee soo saarista xumbada safarka ee la sugayay to usbuuca soo socda, sida laga soo xigtay laba Bloomberg News
Ilo aan la aqoonsan ayaa sheegay in aysan jirin sabab loo sheegay dib u dhaca ku yimid ku dhawaaqista, laakiin ay bilaabeen dhinaca Singapore.
Waxaa la filayaa taariikhda bilawga ah ee heshiis safarka karantiil la'aanta ah loo wareejin doono May 26, laga bilaabo Maajo 19.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Gaadiidka ee Singapore ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga ah in labada dhinac aysan cayimin taariikhda ay ku dhawaaqi doonaan dib u bilaabista xumbada safarka "laakiin waxaan sameyn doonaa marka aan diyaar garowno, waxaan rajeynayaa in dhowaan aan soo dhowayn".
Singapore waxay ahayd qof cod dheer oo taageerta qorshahan si loo xoojiyo duulimaadyada iyo warshadaha dalxiiska kuwaas oo wax weyn ka qabtay cudurka faafa ee Covid-19
Tan iyo bishii Nofembar, Singapore waxaa ku dhacay inyar oo infekshan ah oo lagu kala qaado gudaha maalin kasta, oo caadi ahaan u dhexeeya kiisaska illaa shan, laakiin celcelis ahaan waxaa la arkay 10 ilaa 40 kiis oo maalin kasta la soo dhoofiyo, maaddaama ajaanibta leh shaqooyinka iyo kaararka ardayda ay ku soo laabtaan waddanka.
Habeenimadii Arbacada, wasaaradda shaqaaluhu waxay ku dhawaaqday 11 shaqaale muhaajiriin ah oo ku sugnaa hoyga la seexday. Tani waxay timid ka dib markii 35 jir shaqaale ah oo u dhashay Bangladesh, kuna nool isla qolka jiifka, la tijaabiyey Isniinta intii lagu jiray baaritaanka caadiga ah, in kasta oo si buuxda loo tallaalay.
Shaqaaluhu wuxuu dhammeystiray qiyaasta tallaalkiisii ​​labaad Abriil 13-keedii. 11-ka kale ee tijaabada wanaagsan ka helay waxaa ku jiray saaxiibkiis oo ay isla degganaayeen, waxayna heleen natiijooyin tijaabo seroloji ah oo wanaagsan - oo tilmaamaya caabuq hore.
"Kiisaskaas isla markiiba waa la go'doomiyey waxaana loo gudbiyey Xarunta Qaranka ee Cudurrada Faafa si ay u baaraan suurtagalnimada dib-u-soo-kabashada," ayay wasaaradda shaqaaluhu ku tiri hadal ay soo saartay goor dambe oo Arbacadii ah.
Inta badan in kabadan 60,000 kiis oo loo yaqaan 'Covid-19' kiisas tan iyo markii masiibada ay bilaabatay waxay ka dhacday qolalka jiifka oo ay kujiraan iskudhaf shaqaale muhaajiriin ah oo udhashay koonfurta Aasiya iyo dhul weynaha kuwaas oo kujiro rukhsad shaqo ama S-pass, waxayna hayaan shaqooyin mushahar hoose kujira dhismaha deyrarka maraakiibta iyo farsamaynta.
Hong Kong waxay ka codsatay shakhsiyaadkan inaanay u qalmin qabanqaabada xumbada safarka, ka hor bilowgii bilawgii bishii Nofeembar.
Singapore waxay leedahay mid ka mid ah heerarka tallaalka ugu dhaqsaha badan Aasiya iyo Baasifigga, iyadoo qaadatay 2.2 milyan oo qiyaas ah 5.7 milyan oo muwaadiniin ah. Nolosha gudaha waxay si caadi ah ugu soo laabatay sidii caadiga ahayd, in kasta oo welwelka dib u soo noqoshada uu sii kordhayo maaddaama noocyo cusub oo fayras ah ay soo ifbaxayaan isla markaana kiisaska adduunka ay kor u kacayaan.
Hong Kong waxay aragtay inta udhaxeysa hal ilaa 30 kiis oo cusub oo loo yaqaan 'Covid-19' maalin kasta usbuucii la soo dhaafay waxaana la filayaa inay diiwaan gasho in ka badan 20 kiis oo cusub Khamiista sida laga soo xigtay ilo, iyada oo inta badan ay u badan tahay in kiisas dibedda laga keenay. Khubarada ayaa sidoo kale si isa soo taraysa uga walaacsan faafitaanka noocyo badan oo cudurka faafa ee coronavirus.
Ilaa hadda, qiyaastii 10 boqolkiiba Gobollada 7.5 milyan ayaa helay ugu yaraan tallaalkoodii ugu horreeyay. 5.3 boqolkiiba dadweynaha, ayaa si buuxda loo tallaalay.
Suuqa guryaha caqliga leh ee adduunka ayaa ku kici doona $ 137.9 bilyan ...
Hindiya hadda waxay u furan tahay dalxiisayaasha shisheeye ee si buuxda loo tallaalay
Shiinaha ayaa daaha ka rogay naqshadda Olombikada Beijing 2022...
Suuqgeynta Cusub ee Hawl -wadeennada Dalxiiska Tansaaniya si ay ...
18 Faa'iidooyinka Caafimaadka Cusub ee Cajiibka ah marka lagu raaxeysto Faransiiska ...
Kumanaan qof oo xannibmay markii Koonfur Galbeed baajisay boqolaal kale ...
Sahan cusub oo Naasigu wuxuu bedelay taariikhda sirta Ingiriiska
Duulimaadyo cusub oo ku socda Las Vegas oo ka imanaya San Jose, Boston...
Ma jiro Dalxiis, Ma jiro COVID, laakiin ugu dambayn waa bilaash: Jamhuuriyadda ...
NASA Cusbooneysiin Cusub oo ku saabsan Daah-furka iyo Ku-xidhashada Shaqaalaha SpaceX...
Goobaha ugu sareeya ee Maraykanka si aad lacagta u badbaadiso adigoo jooga hoteel...
IMEX oo hormuud u ah shirarka Yurub iyo ...
Ciyaarta Fasalka Cusub ee Sage ayaa hadda laga heli karaa saxaraha madow
Rabshado rabshado wata ayaa ka dhacay Switzerland oo ka dhashay COVID-19 ...
Dalxiiska Sandals-ka ayaa Soo Bandhigay Kabo Cusub oo Dib loo Malaynayo
Daawashada Cusub ee Raaxada iyo Daawashada Sumcadda SABOTEUR oo bilaabay
Khadka Dhiiga Talyaaniga- Sida Looga Faa'ideysto Dhalashada...
Ugu Horeeyay 100% Helikopter Ruush ah oo Dijital ah Nashqadeeyay ayaa Qaada...
22 HAA, 250 MAYA: Zurab Pololikashvili ee UNWTO...
IMEX America waxay ku faraxsan tahay in Mareykanku fududeeyo safarka ...
Lacagta Liiraha ee Turkiga ayaa hoos u dhacday abidkeedii ugu cuslaa abid ...
IATA ayaa ku dhawaaqday dadka ka hadlaya Shirka Gaadiidka Cirka Adduunka ...
Dalxiiska Hindiya oo ku hungoobay Heerka Qorshaha Cusub
Ma ammaan bay ku tahay Paris mudaaharaadyo waaweyn iyo COVID?
Weerarro Argagixiso oo ka dhacay Uganda
Sinnaanta Helitaanka Tallaalka ee Geesiyaasha Dalxiiska Adduunka ...
Maamulayaasha warshadaha safarka ayaa weli ka go'an inay...
Digniinta Xusuusta Cuntada ee Farxadda Dunida Veggie ee Farxadda leh
Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa ka digtay: Ha dumin...
Australia waxay dib u furtay xuduudaha 18 bilood ka dib COVID-XNUMX
Grand Canyon Jewels: El Tovar Hotel iyo Hopi Gift Shop
Ryanair ayaa ku dhawaaqday Jadwalkii ugu weynaa abid ee Jordan
Baaritaanka Kansarka qanjirka 'prostate': Ragga, Waqtigu waa Hadda
Talaalka cusub ee jiilka xiga ee COVID-19
Dalxiiska Seychelles iyo Club Med Waxay Kordhiyaan Meesha ...
Duulimaadyada caalamiga ah ee Hindiya: hakinta dheeraadka ah ...
Gudoomiyaasha Mareykanka ayaa soo dhaweynaya dib u furitaanka xadka ...
Haddaba Cajiib Sida ay Ghana u xustay Maalinta Dalxiiska Adduunka
Edelweiss Hadda waxay Zurich ka siineysaa 2 Xiriirro Toddobaadle ah ...
Airbus ayaa diyaaraddii ugu horreysay oo nooceedu yahay A220 gaarsiisay Air France
Texas waxay xireysaa meelaha laga gudbo xadka si loo joojiyo ...
Wasiirka Dalxiiska ee Costa Rica Tallaabo cusub
La yaabka leh 83% ee Shirkadaha ku dhuftey Amniga Cyber ​​​​...
Grenada Underwater Sculpture Park waxay dhamaystirtay dayactir
Kanada waxay bilawday safar cusub oo tallaalka COVID-19 ah…
Nuqul 400-sano jir ah oo Mona Lisa ah oo lagu xaraashayo Paris
Horjoogaha KISS Gene Simmons: Anti-vaxxers waa cadow!
Agaasimaha Guud ee WHO oo la hadlay G20 Caafimaadka iyo Maaliyadda...
Dib u soo kabashada Dalxiiska Dominican Been ma tahay? Simpson ayaa ...
Farriin deg deg ah: Facebook, WhatsApp, Instagram hoos ...
Wasiirka Seychelles oo bogaadiyay hagaha dalxiiska ee ...
Jiis Cusub oo Caanaha Bilaashka ah: Microalgae-ka ugu horreeya ee ku salaysan
US, UK, France iyo Germany ayaa ku booriyay muwaadiniintooda inay...
Nin isku dayay inuu rasaas ku furo tareenka dheereeya ee Japan
Sida Loola Safro Covid-ka Cusub ee Omicron? November 27, 2021
Guddoomiyaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka Dr. Peter Tarlow, oo sidoo kale ah wadaadka Saldhigga Koleejka, Waaxda Bilayska Texas, iyo khabiir ku takhasusay safarka & amniga iyo dalxiiska ayaa talo u leh adduunka dalxiiska: Ma jirto waqti argagax leh, laakiin waqtigan waa waqtigii aad isticmaali lahayd maskaxdaada. Taladani waxay imanaysaa laba maalmood ka dib markii uu adduunka ka kacay nooc kale oo Fayraska Corona ah, oo loo yaqaan Omicron, ama farsamo ahaan nooca B.1.1.529.
Jawaabta Koonfur Afrika ee Xayiraadaha Safarka ee Cusub ee la soo rogay November 27, 2021
Dowladda Koonfur Afrika ayaa xustay ku dhawaaqista dalal dhowr ah oo ku saabsan in la sameeyo xayiraad ku-meel-gaar ah oo socdaalka ah Koonfur Afrika iyo dalalka kale ee gobolka.
Kanada ayaa hadda xidhay safarkii ay ku aadi lahayd dalalka Koonfur Afrika Omicron awgeed November 27, 2021
Maamulka caafimaadka dadweynaha ee Koonfur Afrika ayaa xaqiijiyay in COVID-19 nooc cusub oo walaac ah (B.1.1.529) laga helay dalkaas. 24-kii saac ee la soo dhaafay, kala duwananshiyahan - oo ay magacawday Ururka Caafimaadka Adduunka Omicron - ayaa sidoo kale laga helay dalal kale. Wakhtigan, kala duwanaanshahan lagama helin Kanada.
Kanada waxay bixinaysaa goobo cusub oo gooni-gooni ah oo ka yimid COVID-19 November 27, 2021
Dawladda Kanada waxay la shaqaynaysaa la-hawlgalayaasheeda si loo ilaaliyo caafimaadka iyo badbaadada Kanadiyaanka iyo Shaqaalaha Ajaanibka ah ee Ku-meel-gaadhka ah ee Kanada, iyo in la yareeyo fiditaanka COVID-19 iyo noocyada kala duwan ee Kanada. Is-karantiilku waa mid ka mid ah siyaabaha ugu waxtarka badan ee lagu caawinayo joojinta fiditaanka COVID-19.
Kooxda Duulimaadyada ee LATAM Hadda Waxay Gudbiyeen Qorshaha Dib-u-habaynta Cutubka 11aad November 27, 2021
LATAM Airlines Group SA iyo xulafadeeda Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, iyo Maraykanka ayaa maanta ku dhawaaqay xeraynta Qorshaha Dib-u-habaynta ("Qorshaha"), kaas oo ka tarjumaya dariiqa hore ee kooxda si ay uga baxdo cutubka 11. iyadoo la raacayo sharciga Maraykanka iyo Chile labadaba. Qorshaha waxaa weheliya Heshiiska Taageerada Dib-u-habaynta ("RSA") ee Kooxda Waalidka Ad Hoc, oo ah kooxda ugu weyn ee deyn-bixiyayaasha aan la hubin ee cutubkan 11, iyo qaar ka mid ah saamilayda LATAM.
Kansarka iyo Cilmi-baarista COVID: Doorka Cytokines November 27, 2021
Ka dib khudbadii furitaanka ee dhiirigelinta leh, "Aragtida mustaqbalka ee Immunotherapy Kansarka," oo ay bixiso Nobel Prize iyo Tang Prize laureate Prof. Tasuku Honjo ee 14th Asia Pacific Federation of Pharmacologist (APFP) November 26, 2020 Tang Prize Laureate's Lecture for Biopharmaceutical Sayniska, oo ay si wadajir ah u abaabuleen Tang Prize Foundation iyo Society Pharmacological Society ee Taiwan, ayaa ka dhacay 14-aad APFP 1:30 pm (GMT+8) ee Noofambar 27.
Seychelles Tallaabooyinka Safarka Cusub Sababo la xiriira COVID-19 Omicron Variant November 27, 2021
Soo-booqdayaasha Koonfur Afrika, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, iyo Zimbabwe looma ogola inay galaan Seychelles laga bilaabo Sabtida, Noofambar 27, 2021, ilaa ogeysiis dambe, Wasaaradda Caafimaadka Seychelles ayaa ku dhawaaqday. Ma jiraan kiisas kala duwan oo B.1.1.529 ah oo laga helay Seychelles, maamulka deegaanka ayaa xaqiijiyay.
Diyaaradda Qatar Airways ayaa si degdeg ah u joojisay Duulimaadyadii ay kaga imaan jirtay Shan Dal oo Afrikaan ah November 27, 2021
Kala duwanaanshaha cusub ee COVID-19 Omicron ee ka socda guud ahaan Koonfurta Afrika, Qatar Airways ma aqbali doonto rakaabka ka safraya shan waddan oo ku yaal Koonfurta Afrika shabakadeeda caalamiga ah isla markaaba saameyn degdeg ah.
Nederlaan waxay gashay xidhid cusub November 27, 2021
Inkastoo 85% dadka qaangaarka ah ee dalka la tallaalay, heerka sare ee Nederland ayaa la sheegay inuu yahay kii ugu xumaa ee Galbeedka Yurub.
Nooca cusub ee COVID-19 Omicron wuxuu joogaa UK, Belgium, Germany, Netherlands iyo Czech Republic hadda November 27, 2021
Dhammaan 27-ka waddan ee xubnaha ka ah Midowga Yurub ayaa isku raacay in si ku-meel-gaar ah loo joojiyo safarka hawada ee toddobada waddan ee koonfurta Afrika. UK, US iyo Canada ayaa sidoo kale soo rogay xayiraado la mid ah.
Golaha Guud ee UNWTO ayaa lagu booriyay in dib loo dhigo: WTO si aan xad lahayn ayaa dib loo dhigay! November 27, 2021
WTO-da kale ayaa hadda dib u dhigtay shirkeedii ugu weynaa ee wasiiradda ganacsiga, oo la qorsheeyay November 30-keeda Geneva, sababtoo ah khatarta ka iman karta kala duwanaanshaha cusub ee COVID. UNWTO ma raaci doontaa? Xoghayaha Guud ee Sharafta leh, Shabakadda Dalxiiska Adduunka iyo Guddiga Dalxiiska Afrika waxay ku boorinayaan UNWTO inay raacdo WTO.
Tilmaamaha cusub ee CDC ee dadka Mareykanka ah ee ku saabsan Omicron Covid Variant B.1.1.529 November 27, 2021
Xarunta Xakamaynta Cudurada ee Maraykanka ayaa soo saartay bayaan ku saabsan nooca cusub ee Omicron ee Coronavirus ee loo yaqaan B.1.1.529
Jamaica waxay ku dhawaaqday adeegyo cusub oo hawada ah oo ka imanaya Stockholm ilaa Montego Bay November 27, 2021
Guddiga Dalxiiska Jamaica waxay ku faraxsan yihiin inay shaaciyaan in VING, oo ay maamusho Sunclass Airlines, ay ku laaban doonto meeshii ay ku socotay iyadoo duullimaadyo toos ah oo ka imanaya Stockholm, Sweden ilaa Jamaica. Barnaamijka duulista labada toddobaadlaha ah wuxuu bilaaban doonaa Noofambar 2022 wuxuuna socon doonaa illaa Maarso 2023 taasoo qayb ka ah barnaamijka xilliga qaboobaha 2022/23. VING waxay ku shaqayn doontaa wadar ahaan 9 wareeg oo jiilaalka 2022/23 iyadoo leh 373 kursi duulimaad kasta, Airbus A330-900neo.
Mujaahid Birder Herbert Byaruhanga Guddoomiyaha Cusub ee Ururka Dalxiiska Uganda November 27, 2021
Halyeey Herbert Byaruhanga ayaa loo doortay gudoomiyaha Ururka Dalxiiska Uganda (UTA) Noofambar 20 ee sanadaha 2022/23 shirweynihii sanadlaha ahaa ee lagu qabtay Hotel Africana ee Kampala.
IATO Waxay Soo Dhawaynaysaa Dib U Bilaabida Duulimaadyada Caalamiga Ah Laakiin Waxay Rabtaa Waxbadan November 27, 2021
Ururka Hindiya ee Dalxiiska Dalxiiska (IATO) ayaa uga mahadceliyey dowladda qaadashada go'aanka dib u bilaabista duulimaadyada caalamiga ah ee caadiga ah laga bilaabo 15ka Diseembar, 2021.